Trip Forecast | Climb O'Clock
Category Archives: Trip Forecast
Hkakaborazi updates, Photographer Ko Kyaw Thar’s SPOT location
Posted on August 4, 2016	by climberdoelone
Travel photographer Ko Kyaw Thar is on his personal trip to Hkakaborazi. He targeted to climb Southeast Asia’s Highest Mountain, Mt.Hka Ka Bo Razi (5881m) in Naung Mun district, Kachin State, which isawell reputed mountain in Northernmost Myanmar for it’s long approach, tough … Continue reading →
Posted in Climbing, Hkakaborazi, Mountaineering, Myanmar, News, Outdoor, Trip Forecast, Trip Report	| Leaveacomment
ခါကာဘို တောင်ထိပ်မဝေးတော့ပါ …….. ( စာမရေး ပုံမတင်တာကြာပေမဲ့ ဒီနေ့တော့ အံ့အားသင့်စရာတွေကို တွေ့မိတာရယ် ၊ အသိမိတ်ဆွေတွေကို ပြောပြချင်တာရယ်ကြောင့်ရေးလိုက်ပါဦးမယ် ) လတ်တလော ရင်ကိုအလှုပ်ခတ်နိုင်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ ခါကာဘို တောင်တက်သတင်းပါ ၊( သဘာဝခေါ်သံ တောင်တက်အသင်းက ခါကာဘိုတက်နေကြတဲ့ တောင်တက်အဖွဲ့ , ရာသီဥတု ဘာညာစတာတွေ စိတ်တွေပူနေမိတာ…. အစိုးရိမ်ကြီးနေမိတာမို့ ပါ ) ခါကာဘိုရာဇီတောင်မြင့်ကြီးက မီတာ ၅၈၀၀ ကျော်မှာပါ ၊ တောင်တက်အဖွဲ့က မီတာ ၄၈၀၀ကိုရောက်ရှိလို့နေပါပြီ တစ်ကယ်မဝေးတော့ပါ တောင်ထိပ်ရောက်ရန် … Continue reading →
Posted in Hkakaborazi, Mountaineering, Trip Forecast	| Tagged Climb O' Clock, Climbing, ION_Invitation of Nature, Mountaineering, Myanmar Climbing	| Leaveacomment
South-East Asia Climbing Updates (GamlangRazi expedition team, about to kick their lever to Unclimbed Summit)
Posted on August 14, 2013	by climberdoelone
Drum Rolls Please ……..♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ Dnnn tnnnn Tmmm ♪ ♫ … Continue reading →
Posted in Gamlangrazi, Trip Forecast	| Tagged Gamlang Razi, Myanmar Climbing, Putao, SoutheastAsia Climbing	| Leaveacomment
Posted on August 12, 2013	by climberdoelone
အိမ်မက်မဟုတ်တော့တဲ့ ဂမ်လန်ရာဇီ ဂမ်လန်ရာဇီ ရေခဲတောင် ကိုတက်ရောက်မည့် တောင်တက် အဖွဲ့ရဲ့ ခရီးစဉ် မနက်ဖြန်မနက်မှာ စတင်ပါပြီ။ မြန်မာ့ရေခဲတောင်တွေ အများဆုံးရှိရာဒေသရဲ့ လှပတဲ့ ဝင်ပေါက်မြို့ လေးဖြစ်တဲ့ ပူတာအိုမြို့ကို မနက်ဖြန် ၁၃ ဩဂုတ်လ၂၀၁၃ နေ့မှာ တောင်တက်အဖွဲ့ဟာ ရန်ကုန်ကနေ ၁၃ ရက်နေ့ မနက် ပိုင်း အဲ ပုဂံ လေယာဉ်နဲ့ ထွက်ခွါပြီး ဂမ်လန်ရာဇီတောင်တက်ခရီးစဉ်စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပူတာ အိုမှာ ၁၄ ရက်နေ့ သန်ဘက်ခါ တရက် … Continue reading →
Posted in Gamlangrazi, History, News, Trip Forecast	| Tagged Climb O' Clock, Gamlang Razi, Myanmar Climbing, TCCM	| Leaveacomment